MuldhataTV Gadaa – Welcome to bilisummaa
“Odeeffannoo bilisaa, ummata bilisaaf” odeeffannoon xinnoo hin qabdu!
Masakamni TV gadaa, Bu’uurri sirna gadaa akka gabatuu fi guddatu sagalee ta’ee hojachuu
Dirqama TV Gadaa
TVn Gadaa sagalee ummata Oromoo ta’udhaan, ummati Oromoo yaadaa fi yaaddoo qabu, bilisaan keessummeessa.
TVn Gadaa tokkummaan, bilisummaa fi mirgi dimokraasii Oromoo akka dagaaguu, akkasumas haqa fi dhugaa ummatootiin qaban midiyaa walaba ta’ee tajaajila.
TVn Gadaa, daba, yakka, samichaa fi acuuccaa sabaa fi sab-lammii Itiyoophiyarra, sirna bitootan gahaa jiru murannoon saaxila
Itiyoophiyaa keessatti ijaramuu midiyaa walabaaf, TVn gadaa qooda isa irraa eegamu gumaacha.
TVn gadaa, aadaa, afaanii fi duudhaa oromoo guddisuu keessatti media qooda kennu ta’a.
Tags Abo garee kamaal hyaluu gonfaa OLF
Previous UN: 3,000 Ugandan and Burundi Soldiers Killed in Somalia
Next Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa
Ummata Bal’aa Oromof media babal’isuun heduu barbaachisaadha. Gadaa TV guddadhaa, jabaadhaa isin waliin jirra.
waa’ee Gadaa tv bayyee baribachssaa mee waan hundaan issiin birra jiraa median tokko sabaa tokkof bayye barbachissaa